नोट हाम्रो, हात्ती कसको–कसको ! - Samudayiknews
हजारको नोट अर्थात सजिलो भाषामा–‘हात्ती’ । तर, यसको त्यही हात्तीमाथि प्रश्न उठेको छ – के यो नेपाली नै हो त ? ‘हो’ भनेर प्रमाण दिने कोही निस्किएको छैन । बरु ‘होइन’ भनेर आधार देखाउने धेरै छन् । विवाद बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षित उपाय निकालेको छ– हात्ती नै फेरिदिने । अब नेपालमै जन्मिएको जुम्ल्याहा हात्ती राम–लक्ष्मणको पोट्रेट तस्बिर छापिएका हजारका नोट अर्को दसैंसम्म आइसक्नेछन् ।
त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो समाचार आजको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा विजय बञ्जराले लेखेका छन् ।
यो पनिः काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि आउँदो भदौ २८ गतेवाट सर्वसाधाणका लागि नयाँ तथगा सफा नोट सटही गर्ने भएको छ । सर्वसाधारणले दशैंका लागि राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंक विभिन्न शाखावाट नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सर्वसाधाणले यी बैंकका शाखावाट प्रति व्यक्ति २० हजार रुपैयाँ बरावरको ५, १०, २०, ५० र एक सय रुपैयाँ दरका नयाँ तथा सुकिलो नोट सटही गर्न पाउनेछन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन बिभागका सटही काउण्टरवाट सोही दरका प्रति व्यक्ति २७ हजार रुपैयाँ सम्म नयाँ नोट सटही गर्न सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सर्वसाधाणले प्रत्येक नोट खुद्रा संख्या एक सयको प्याकेटका आधारमा पाउने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय, संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य संघ संस्था तथा कार्यालयलाई सम्वन्धित निकायको पत्रका आधारमा मुद्रा व्यवस्थापन विभाग थापाथलीको काउण्टरवाट भदौ २१ गतेवाट ३० गतेसम्म नोट सटहीको सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकका उपत्यका बाहिका शाखा र बैंक मातहत सञ्चालित नोटकोष रहेका वाणिज्य बै.कले पनि भदौ २८ गतेवाट सर्वसाधाणलाई नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उपत्यकामा यी शाखावाट साटिन्छ नोटः नेपाल बैंक–काठमाडौं बैकिङ अफिस न्युरोड, बालाजु, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, किर्तिपुर र भक्तपुर । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक–सिंहदरवार प्लाजा भवन, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानो थिमी, विशालबजार र नक्साल र कृषि बिकास बैंक–गौशाला, कोटेश्वर, रामशाहपथ, रत्नपार्क र मंगलबजार
Prevदुई तिहाइको सरकार किन यति कमजोर ?
Nextदर्जीको ह’त्यापछि परिवारको विचल्ली, ‘किरिया खर्च नै छैन्’